Ilaa Xilligaaga daa'imka ah 2: Taariikhda Siideynta: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad ka ogaato Netflix! - Madadaalo
Ilaa Xilligaaga daa'imka ah 2: Taariikhda Siideynta: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad ka ogaato Netflix!
ILAA DHAMAAD WAQTIGA CUSBOONAYSIINTA XILI LABAAD
SIIDAYNTA XILLIGAAGA daa'imka ah 2 ayaa la xaqiijiyay…
XILLI 2 SHAQADA SUURTAGALKA AH…
Ilaa Xiligaada daa'imka ah 2-'To your daa'in,' anime shucuur qoto dheer, ayaa dib loo cusbooneysiiyay xilli labaad, taariikhda siideynta ayaa ugu dambeyntii lagu muujiyay online todobaadkan.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu soo jiidashada badan ee anime waa nuxurka ballaaran ee ay heli karaan daawadayaasha adduunka oo dhan.
Waxa laga yaabaa inaad ka baxdo hal taxane oo tacabureed oo aad u weyn kaas oo kaa dhigaya inaad ku qayliso kayd jacayl oo qalbi jab leh kaasoo kaa oohinaya goob kasta oo weyn.
La qabsiga Brain's Base's blockbuster ee Fumetsu no Anata e, aka To Your Eternity, wuxuu ku bilaabmay xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee cajiib ah 2021, isagoo ilmaynaya indhaha taageerayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, marka hal albaab xidho, mid kale ayaa furma - Ilaa Your da'danimada xilli 2 taariikhda sii deynta dhawaan ayaa lagu dhawaaqay onlayn!
Ku dhawaaqista xilliga daa'iminka 2 waxa la sameeyay Ogosto 30-keedii, 2021, saacado uun ka hor dhammaadka xilli-ciyaareedka 1-aad ee laga sii daayay Japan.
Cusbooneysiinta anime waxaa badanaa lagu go'aamiyaa laba arrimood: nuxurka asalka ah iyo caannimada. Ilaa daa'imiintaada, mahadsanid, ayaa ku filan labadaba si loo dammaanad qaado xilliga anime ee labaad.
Ilaa xilliga daa'imiintaada, 1 final ayaa la isku hagaajiyay ilaa Volume 6 cutubka 54 ee taxanaha manga, sida ay qabaan wuxuush iyo dhaleecayn.
Si kastaba ha ahaatee, Japan, 16 mujal oo leh 146 cutub ayaa la daabacay, taas oo muujinaysa in ay jiraan agab ku filan ugu yaraan hal haddii aysan ahayn laba xilli oo dheeraad ah oo animation ah!
Ilaa daa'imkaaga waxa aad kasbatay dib u eegis heersare ah oo ka yimid taageerayaasha iyo dulmarayaasha aduunka oo dhan. Taxanaha telefishinku wuxuu hadda leeyahay IMDB qiimihiisu yahay 8.7/10, qiimaynta Crunchyroll ee 4.7/5, iyo qiimaynta MyAnimeList ee 8.42/10, iyada oo tan dambe ay ku jirto ku dhawaad ​​196,000 dib u eegis shaqsiyeed.
Waxaan aadeynaa Xiligaada daa'imka ah 2, xanuun badan. pic.twitter.com/x5rYPL3Zs0
- Haira ❀ semi ia (@orahaira) Ogosto 30, 2021
Marka laga soo tago ku dhawaaqida taxanaha labaad, bogga rasmiga ah ee To Your Eternity Japanese wuxuu ku dhawaaqay in xilli ciyaareedka 2 uu soo bixi doono 2022 oo qayb ka ah jadwalka anime ee Dayrta.
Shabakadda rasmiga ah ee taxanaha ayaa xaqiijisay tan, iyadoo sawir cusub oo xayaysiis ah - eeg hoos - la dhajiyay.
Xiliga 2 Qaybta 1aad waxa la filayaa in uu socdo Isniinta, Oktoobar 3deeda ama Isniinta, Oktoobar 10keeda, iyada oo aan taariikh gaar ah la shaacin.
AKHRI WAX DHEERAAD AH… Laadbug mucjiso ah Xiliga 5: Taariikhda Siideynta: Jilayaasha, Trailer Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato!
Tani kaliya kuma mid aha bilowga jadwalka hawada dayrta ee baahinta caalamiga ah, laakiin waxa ay sidoo kale ilaalinaysaa barnaamij isku mid ah oo ka jira Japan sidii xilli ciyaareedkii ugu horreeyay.
Xilliga 2 ee isbeddelka degdegga ah waxaa sabab u ah kooxda wax soo saarka ee Brain's Base ee diyaarinta sare, laakiin sidoo kale helitaanka walxaha isha.
Sidii hore loo sheegay, 10 mugga manga oo dhan ayaa diyaar u ah la qabsiga, iyaga oo jaraya wakhtiga wax soo saarka mashruuc kasta oo animation ah kala badh.
AKHRI WAX DHEERAAD AH… Kulaylka 2: Taariikhda Siideynta: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato!
Taageerayaashu waa inay ogaadaan, si kastaba ha ahaatee, in nambarka dhacdada xilli-xilliyeedka aan wali la go'aamin. Ma socodsiintii 20-ka qaybood ee gaarka ahayd ee Xiliga 1 ayaa lagu soo celin doonaa Xiliga 2 mise wax soo saarku ma u wareegi doonaa baahinta koorsada kala qaybsan ee caadiga ah?
Ilaa Xiligaada daa'imka ah 2
Loo qorsheeyay Dayrta 2022
Wax badan https://t.co/DjSx713ot5 pic.twitter.com/RCy0K70j7V
- AnimeTV Chain (@animetv_jp) Janaayo 20, 2022
Digniin: Qaybtani waxa ay ka kooban tahay duluc kooban oo la filaayo inay ka mid tahay fallaadhaha sheekada Manga ee loo qorsheeyay in la tarjumo xilliga 2.
Iyadoo loo maleynayo in xilli labaad uu dabooli doono qaddarka la midka ah ee agabka isha sida ugu horreeya, fallaadhaha soo socda waxay u badan tahay in la waafajiyo xilliga 2:
Ilaalada Arc: cutubka 56-62
Boqortooyada Uralis Arc: cutubka 63 – 70
Bennett Church Arc: cutubka 71 - 82
Renril Arc: cutubka 83 - 116
La qabsiga dabaqa ilaa cutubka 116 kuma filna oo kaliya xilli anime ah oo dhammaystiran, laakiin waxa ay sidoo kale waddada u xaari doontaa xilli saddexaad oo suurtogal ah kaas oo dabooli doona taxanaha ''Sharciga Labaad',' oo loo yaqaan 'Present Era arc'.
AKHRI WAX DHEERAAD AH… Kuma Wanagsani Xiligan 2: Taariikhda Siideynta: Jilayaasha, Shirqoolkii iyo Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad ka ogaato Netflix!
Ilaaliyeyaasha Arc waxay u badan tahay inay furaan xilli-ciyaareedka labaad, kaasoo Fushi uu kaligiis ku ahaa jasiirad cidlo ah afartan sano tan iyo markii Piran uu u dhintay da 'weyn. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu la kulmaa inantii Hayase iyo sidoo kale koox 'Mas'uul ah,' kuwaas oo Fushi u arka ilaahnimo.
pls i sii xilli 2 mar hore
- pusi sayid (@KANEKIsSMELL) Ogosto 28, 2021
Maqaalkan waa la cusboonaysiin doonaa marka macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xilligaada daa'imnimada 2 la helo.
Xiliga 2-aad ee Aan La Guulaysan Karin: Miyuu Soo Laabtay? La cusboonaysiiyay ama la joojiyay!
Ogow dhammaan wixii ku saabsan Schitt's Creek
daawo si online lacag la'aan ah
youtube filimada bilaashka ah ee khadka
sida loo furo tubada
youtube -ka mp3 app bedelka soo dejiyaha
ciyaaraha aan la xanibin ee goobaha google ee dugsiga
websaydhka ugu wanaagsan ee lagu soo bandhigo bandhigyada tv -ga